Gumiho ကားထဲက မင်းသမီးလေး Hyeri အတွက် Food Truck ပို့ပေးခဲ့တဲ့ Rosé | News Bar Myanmar
Girl’s day အဖွဲ့ဝင် Hyeri နဲ့ BLACKPINK အဖွဲ့ဝင် Rosé တို့ အရမ်းရင်းနှီးကြတယ်ဆိုတာ အားလုံးလည်း သိကြမှာပါနော်။ Rosé လေးဟာ သူ့အမကို အရမ်းချစ်သလို Hyeri ကလည်း Rosé လေးရဲ့ အပြောအဆိုတွေ အပြုအမူတွေဆို သဘောကျလွန်းလို့ သည်းသည်းလှုပ်ပါဘဲ။
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Chemistry ဟာ အရမ်းမိလွန်းလို့ Knowing Bro အစီအစဉ်က Guest အဖြစ် နှစ်ယောက်တွဲ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ Hyeri က Rosé ရဲ့ Solo music Video ရိုက်ကူးရေးလုပ်နေတုန်းက Food truck ပို့ပေးဖူးသလို Rosé မွေးနေ့ရောက်တော့လည်း suprise တွေလုပ်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
လက်ရှိလွှင့်နေတဲ့ Gumiho ကားမှာ ဇာတ်ဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Hyeri ဟာ ခု လတ်တလောမှာ သူမရဲ့ နောက်ထပ်လွှင့်မဲ့ Drama ”Think Of The Moon When Flowers Bloom” ဇာတ်လမ်းကို ရိုက်ကူးနေပါတယ်။ Rosé လေးဟာ ထိုရိုက်ကွင်းကို food truck ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။
Banner မှာရေးထားတာကတော့ “အားလုံးဘဲ !! ဒီနေ့အတွက် Heyri unnie က churros နဲ့ coffee ကျွေးမွေးသွားမှာပါ။ Think of the Moon When Flowers Bloom’, hwaiting!” ဆိုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ churros လေးတွေကို နှစ်ယောက်သားရဲ့ နာမည်ရေးထားတဲ့ အိတ်ကလေးနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းအောင် ထုပ်ပိုးထားပြီး Coffee ကားရဲ့ Banner မှာလည်း ခုလိုရေးထားပါသေးတယ်။
“ ပန်းလေးတွေ ပွင့်လာတဲ့အချိန်မှာ churros လေးတွေကို စဉ်းစားလိုက်ပါနော်။ churros ကို အရသာရှိရှိသုံးဆောင်ပါ။ Drama ကလည်း ပေါက်ကွဲထွက်တဲ့အထိ အောင်မြင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်” Rosé လေးဟာ ခုလို ကဗျာဆန်ဆန်လေး food truck ပို့ပေးမှာတော့ Heyri လည်း မကြွေဘဲနေနိုင်ပါ့မလားနော်။
Rosé ပေးတဲ့ Food truck ကားနဲ့ ပုံတွေအများကြီးရိုက်ပြီး Instagram မှာ ခုလို Caption နဲ့ တင်ခဲ့ပါတယ်။ “Park Chaeyoung တို့ကတော့ တကယ်ပါဘဲ 🖤💖ငါ့ညီမလေးက နေ့တိုင်း ခုလို အားပေးနေတာ။ I love you!! unnie တော့ ငိုမိနေပါပြီ 🥺💛❤️❤️❤️Rosé ❤ Roseo❤️❤️❤️”
Next အဓိကသရုပ်ဆောင်များကိုကြေညာလိုက်တဲ့ ရုပ်လုံးပေါ်လာတော့မယ့် Heaven Offical’s Blessing »
Previous « ဂန်နမ်မြို့နယ်က တန်ဖိုးကြီး အ​ဆောက်အအုံတစ်ခုကို ​ရောင်းချလိုက်တဲ့ မင်းသမီး Jun Ji Hyun